Dugsiga sare | Skolverket nyanlända
Barnaamishka bilaabida oo dugsiga sare
Quseeyso dhallinyarada da’dooda tahay 16 ilaa 20 sano:
Waa maxay dugsiga sare?
Waxbarashada dugsiga sare waa bilaash oo in la dhigtaa ma aha qasab, dhallinyarada ayaana go’aanka iska leh hadii ay rabaan iney dhigtaan markey dhameeyaan dugsiga aasaasiga. Dusgiga sare wuxu ka kooban yahay barnaamish qaranka, barnaamishka bilaawga iyo barnaamishyo ka duwan qaabka kuwa qaranka.
Tirada guud ee barnaamishyada qaranku waa 18. Barnaamish kasta waxaa la dhigtaa 3 sano.
Barnaamishyada kala duwan waxey ahaan karan barnaamishyada kuwa isku diyaarinta shaqo ama waxbarashada jaamacadaha.
Barnaamishyada isku diyaarinta shaqo waxa loo dhigan karaa ama ay ahaan karaan goob shaqo oo dugsi sare ah.
Ardeyda aan buuxin shuruudaha lagu galo barnaamishka qaranka waxey dhigan karaan 5 barnaamish oo ah barnaamishka biloowga.
Barnaamishka bilaawida luqada waxa loogu talagalay dhallinyarada dhowaan Sweden timid. Waxbarashadu waxay xooga saareysaa luqada iswiidhishka, si uu ardeygu ugu sii gudbi karo barnaamish kale ama waxbarasho kale. Waxbarashada waxa loo qorsheeyn si ardeyga aqoontiisa ku habboon.
18 barnaamish oo dugsiga sare
Barnaamishyada barashada shaqooyinka
Barnaamishka carruurta iyo xilliga firaaqada
Barnaamishka korontada iyo tamarta
Barnaamishka gaadiidka iyo wax raridda
Barnaamishka ganacsiga iyo maamulka
Barnaamishka farsamo gacmeedka
Barnaamishka hodheelka iyo dalxiiska
Barnaamishka farsamaha warshadaha
Barnaamishka dhowrista deegaanka
Barnaamishka makhaayada iyo raashinka
Barnaamishka VVS iyo guriga
Barnaamishka xannaanada iyo daryeelka
Barnaamishyada isku diyaarinta waxbarasho jaamacadeed
Barnaamishka adabka bani’aadimka
Barnaamishka culuunta dabiiciga ah
Barnaamishka cilmi barashada mushtamaca
Yaa dhigta dugsiga sare?
Dugsiga sare waxaa loogu talagalay dhallinyarada da’doodu tahay 16 ilaa 20 sano. Markuu qofka 20 gaaro wuxuu haystaa fursad uu ku dhigan karo waxbarashada dadka waaweyn ee dugsiga sare.
Ardeyda ku baastay maadada iswiidhishka ama iswiidhishka luqada labaad, ingiriiska iyo xisaabta iyo shan maado oo kale waxey bilaabi karaan barnaamishka barashada shaqooyinka midkood. Ardeyda ku baastay maadada iswiidhishka ama iswiidhishka luqada labaad, ingiriiska, xisaabta iyo sagaal maado oo kale waxey bilaabi karaan barnaamishyada isku diyaarinta waxbarasho jaamacadeed midkood.
Ardeyda aan buuxin shuruudaha lagu galo barnaamishka qaranka waxey dhigan karaan 5 barnaamish oo ah barnaamishka biloowga. Barnaamishyada biloowga lagu ma helo shahaadada dugsiga sare, oo qorshaha baa ah in ardeygu u gudbo barnaamishyada qaranka midkood ama shaqo. Barnaamishka bilaawida luqada waxa loogu talagalay dhallinyarada dhawaan Iswiidhan timid.
Darajada shahaadadu waa lix tilaabo A ilaa F. A ilaa E waxey micnaheedu tahay waad ku baastay halka F micnaheedu yahay waad ku dhacday. Shahaadada waxa la bixin koorso kasta markaad dhameysid ama shaqo mashruuc. Markuu ardeyga koorsooyinkaas dhammaan iyo shaqooyinka mashruuca shahaado laga wada siiyo baa ardeyga la siin shahaadada dugsiga sare.
Hadii ardeyga maqnaanshihiisu aad u badan yahay oo aan shahaado la siin kari maadaama aan la qiimeyn karin aqoonta ardeyga, waxa la siin xariijin (-) oo waraaqada shahaadada lagu qori. Shahaado F iyo xariijin ma loo isticmaali karo dugsiga aasaasiga oo ardeyda maskaxdoodu gaabiso ama dugsiga sare oo ardeyda maskaxdoodu gaabiso.
In la doorto barnaamijyada dugsiga sare
Filimkan wqxan aad uga sii hadleynaa dugsiga sare su’aalona waan uga jawaabeynaa.